xildhibaanada baarlamaanka oo leh kulamo xasaaasi eh | ΚÜ šôõ ÐΗΔwΑΑw βìŸΔcΔÞ∑ ↓
Xildhibaanadan oo tiradoodu ka badnayd 160 ayaa waxa ay qadada kadib ka hadleen sida xaalka us yahay iyo qorshadhooda ah sidii codka kalsoonida loogaga laaban lahaa ra’iisal wasaare Saacid.
Kulan uu yeelanayo baarlamaanka berito oo 30ka November ayaa la filayaa in xildhibaanada ay ka doodaan mooshinka laga keenay ra’iisal wasaaraha,waxaana warar lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan in berrito cod loo qaadi doono sii joogista ra’iisal wasaare Saacid ee xafiiska ra’iisal wasaaraha dalka.
degaan ku yaal gobalka shabeelada dhexe
Sidoo kale waxaa jira dadaal xoog leh oo ka socda dhinaca xildhibaanada taageeraya ra’iisal wasaaraha iyadoo xildhibaanadana ay kulan qado ah la yeesheen ra’iisal wasaare Saacid.
Khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra’iisal wasaare Saacid ayaa sababay in uu u gudbo xildhibaanada baarlamaanka, waxaana wararka ay sheegayaan in inta badan xildhibaanada ay taageesan yihiin fikirka madaxweyne Xasan Sheekh ee ah in uu ra’iisal wasaaruhu baneeyo xafiiska.
Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa hore ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka inay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka u dhexeeya madaxda dalka. Hase yeeshee waxaa ay u muuqataa in baaqan uu noqday mid dhagaha laga fureystay oo ay xildhibaanada labada dhinac la kala saftaan.
Ra’iisal wasaare Saacid ayaa diiday in uu iscasilo kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ka codsaday in uu is casilo. Tan iyo markii uu soo baxay codsigan ayaa waxaa laga dar
← yahuuda oo ka soo hor jeesatay hishiiska iran iyo reer galbeedka
In ka badan 100 qof soomaali ah oo sacuudiga laga soo tariilay →
One response to “xildhibaanada baarlamaanka oo leh kulamo xasaaasi eh”
biyacade January 3, 2014 at 10:06 pm · ·
Reblogged this on Biyacade.